Kedu ụzọ kachasị mma isi nweta backlinks mpụga maka SEO?
Ka anyị lee ya anya - ịmepụta backlinks ndị dịpụrụ adịpụ maka SEO bụ otu n'ime ihe ndị bụ isi nwere ike ịkwanye ebe nrụọrụ weebụ gị ma ọ bụ blog iji mee ka ọ dịkwuo mma n'ịntanetị. Mana tupu ịmalite, tụlee eziokwu a jọrọ njọ banyere iwuli ha na njikarịcha search engine. Ya mere, jide n'aka na ị dị njikere site na isi ihe ndị a tupu ị nwee ike ịga n'ihu na nataghachi azụlinks maka SEO:
I kwesịrị inwe ebe nrụọrụ weebụ gị ma ọ bụ blog kachasị mma na teknụzụ.
I kwesiri iwuli ulo oru siri ike.
I kwesịrị itinye oge gị na mgbalị gị n'ime ihe dị iche iche pụrụ iche nke na-anapụta uru.
Nke a bụ ụfọdụ n'ime ụzọ kachasị mma iji rụpụta nsụgharị backlinks maka SEO:
1. Họrọ ngwá ọrụ nyochaa njikọ ziri ezi, dị ka nchịkọta Semalt, Frog Frog SEO Spider, Moz's Open Site Explorer - M nwalere ha na omume maka di na nwunye weebụsaịtị na blọọgụ. Na-arụ ọrụ nke ọma n'ịtọzi njehie ọ bụla nwere ike imetụta ezigbo ahụmịhe ọrụ site na usoro ndị a:
Mmetụta weebụ na-anabata ozi ọma na njirimara onye ọrụ.
ọdịnaya nke ibe weebụ, yana nke metadata.
302 redirects na redirect chains.
404 njehie na ihe ndị ọzọ na-ezighị ezi canonical.
Ejighi ezi nsụgharị backlinks na ntụziaka SEO (e. g. , noindex, oche).
2. Na-elekwasị anya na mkpa onye ọrụ, kama ị na-ejikwa atụmatụ algorithm nke Google. M na-ekwu ebe a na ọdịnaya gị ga-eweta ezigbo uru ma mee onye ọrụ ahụ obi. N'ụzọ dị otú ahụ, itinye oge gị na mgbalị gị n'ịmepụta backlinks ndị dịpụrụ adịpụ maka SEO - na-enweta ha dịka ihe dị n'ime gị - jide n'aka na ị nweghị ma ọ dịkarịa ala nsogbu ndị na-esonụ:
ọdịnaya gị anaghị eme ezigbo onye ọrụ (ederede ogologo oge ma ọ bụ nke na-agwụ ike, nke na-agaghị adabere n'igbo mkpa nke ndị na-enyocha ndụ).
ọdịnaya agwụla (cheta na - echere na ebe nrụọrụ weebụ gị ma ọ bụ blog ga-egwu ya nke ọma ma nyere onye ọrụ aka karịa ndị na-agba niche gị).
Ogologo nnyocha omimi nke omimi (N'ezie, inwe ikike dị ukwuu nwere ike ịba mma ịchọta onwe gị na nchọta nke Google, mana ọ ka na-ezughị oke iji merie).
Enweghị ọgụgụ isi na ụdị mmadụ (tụlee ịmepụta ọmụmụ ihe onwe gị, nchịkọta akwụkwọ, infographics, na ihe ọ bụla ọzọ bara uru nke na-adọrọ mmasị gị na-ege ntị).
Nlekọta anya na-adịghị mma (mee ka ọ dị mfe ọgụgụ na nkwụpụta okwu, isi akụkọ dị mma, na ndepụta nkọwa, jiri naanị ihe odide edere ederede, edemede ndị siri ike, na ihe osise, yana akara ndị na-adọrọ mmasị na ọdịda dị mma).
3. Nanị ụzọ ị ga-esi nweta ihe ntanetere azụ maka SEO na-arụ ọrụ mmekọrịta. Ka anyị chee ya ihu - ebe nrụọrụ weebụ gị ma ọ bụ blog abụghị agwaetiti dịpụrụ adịpụ nke mmiri oké osimiri kewara. Naanị njikọ nke ọma na mmekọrịta dị mma pụrụ iduga n'ị nweta ihe nkwado dị iche iche dị ike ma na-agbasawanye na Weebụ. Iji rite uru site na usoro nke na-agba ọsọ na njiri onwe gị, tụlee ihe ndị a:
Inye ihe dị ukwuu na ọdịnaya gị nwere ike ime ka ị ghara ịnweta ọzọ backlinks na-ezo aka na ebe nrụọrụ weebụ gị ma ọ bụ blog na nloghachi kama ọ ga- enyere gị na ebe nrụọrụ weebụ ma ọ bụ blog n'ịwa ndị ọzọ na-edu, mbak, ndị a, wdg.
Ịmepụta mmekọrịta dị mma ma na-arụkọ ọrụ ọnụ n'etiti ndị mmekọ na ndị na-ede blọgụ. Akwụsịla onwe gị na iwe ahụ na iwepụghị ozi ọma site na ozi emmanuel.
Dee ederede echiche dị mma na ihe dị mkpa n'elu blogs gara aga ma ọ bụ weebụsaịtị kachasị na ụlọ ahịa gị ma ọ bụ niche ahịa.
Na-agbanye ebe nrụọrụ weebụ ma ọ bụ blog gị ka ọ bụrụ onye kwesịrị ekwesị, ọ ga-abara gị uru inweta nkwado azụmazụ ahụ bara uru. Echere m na ị nwere ike imere ihu ọma gị na isiokwu gị, posts ma ọ bụ ịde blọgụ ndị ọbịa bara uru na ụfọdụ ihe kachasị mma ma ọ bụ isiokwu kachasị mkpa - naanị iji kwalite ọdịnaya gị ma bụrụ ndị a na-ahụ maka ọtụtụ ndị nwere mmasị na Intanet dị ka o kwere.
Maka nkwubi okwu, cheta na ihe kachasị mma ị ga-eme bụ ịnweta ọtụtụ okwu na ịmekọrịta site na mgbasa ozi mgbasa ozi na-ewu ewu - naanị n'ime awa ole na ole na-ebipụta ihe ọhụrụ kachasị ọhụrụ, ihe ọhụrụ, ma ọ bụ ihe ọhụrụ ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ. Ya mere, m nwere ike ikwu na ị na-etinye aka n'ime isiokwu sara mbara nke Nkwalite Ọdịnaya maka nyocha gị n'ọdịnihu. Nke ahụ ga-akwụ ụgwọ mgbe niile, ejiri m n'aka Source .